Is’Art Galerie : maneho ny fahitany ny any « Atsimo » i Rijasolo | NewsMada
Is’Art Galerie : maneho ny fahitany ny any « Atsimo » i Rijasolo
Par Taratra sur 07/05/2016
Taorian’ny tao amin’ny Institut français de Madagascar, ny volana janoary teo, hita eny amin’ny Is’Art Galerie, eny amin’ny La Teinturerie Ampasanimalo, indray ny « Atsimo », angon-tsaripika an’i Rijasolo, hatramin’ny 30 mey izao. Araka izany lohaheviny izany, avoitran’ireo sary ny tontolo mahafinaritra sy mahavariana ary ireo tranga tsy fahita firy, saingy voarain’ny fitaovana fakana sarin’i Rijasolo, tany amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny.
Ambaran’ny mpanakanto, fa tsy afaka hihambo ho mahalala tsara iny toerana iny ny tenany. Tsy nisalasala anefa izy naneho ny fitiavany an’Ihosy, Toliara, Taolagnaro… fitiavana nanosika azy hitsidika matetika izany faritra izany sy hitahiry an-tsary izay lalovany.
Ahitana sary 36 (maro loko, mainty sy fotsy) ny « Atsimo » ; sary nalaina tany Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana teo anelanelan’ny taona 2007 sy 2015. Ampahatsiahivina fa efa namoaka boky roa i Rijasolo : « Madagascar, nocturnes », ny taona 2013 sy ny « Akamasoa, rêves d’enfants », nivoaka herintaona taorian’io.